अनलाइन कक्षा : पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई के गर्ने ? बाँकेका स्थानीय तहलाई छैन चासो - Arthapage
अनलाइन कक्षा : पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई के गर्ने ? बाँकेका स्थानीय तहलाई छैन चासो
नेपालगन्ज २७ भदौ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेको छ। निर्देलाशिका जारीसंगै बाँकेका निजी विद्यालयले पढाई शुरु गर्न लागेका छन् तर इन्टरनेटको पहुँच नभएका बालबालिकालाई के गर्ने भन्ने विषयमा बाँकेका स्थानीय तहलाई चासो छैन ।
यहाँसम्मकी लामो समयदेसख बन्द रहेको शैक्षिक प्रणालीलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्नेमा समेत सामान्य छलफल समेत हुँदैन । स्थानीयले चाहेमा धेरै काम र्ग सक्छन् । सामान्य अवस्थाको जस्तो गरी विद्यालय सन्चालन गर्ने अवस्था नभए पनि बैकल्पि तरिकारले हुने पढाईमा स्थानीय तहले सहजिकरण गर्न सक्ने बिज्ञहरु छन् ।
मन्त्रालयले अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएसँगै शुल्क लिन पाइने भएको हो। तर शुल्क लिन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भने स्वीकृति दिनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
यसअघि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क मागेपछि मन्त्रालयले नतिर्नू भनेको थियो।
निजी विद्यालयहरूले पनि सरकारीमा जस्तै असार १ गतेदेखि अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन जारी राखेका छन्। यासंगै बाँकेका निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा शुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तो तयारी भएपछि इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका बालबालिकाले के गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो हुन थालेको छ । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका बालबालिका इन्टरनेटको अभावमा पढ्नै बन्चित हुने हुन की भन्ने चिन्ता छ । शुक्रवार नेपालगन्जको एउटा विद्यालयले अनलाइन कक्षाका लागि ल्यापटप, सूविधायुक्त मोवाईल वा कम्प्युटर किन्न सूचना निकाल्यो । यस्तो सामाग्री किनेर इन्टर जोड्ने सार्मथ्य सबै अभिभावकको पहुँचमा नहुन सक्छ । त्यस बालबालिकालाई बढाई बन्चित हुने अवस्था आउन नदिन बाँकेका स्थानीय तहले केही गरेका छैनन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यार्थी र विद्यालयलाई आगामी असोजबाट निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः 7:59:16 AM |
Prevबैंकको उपप्रबन्धक पदबाट राजिनामा दिएर कृषि फार्म सञ्चालन
Nextकृषि र पशु प्राविधिक पढेकालाई अवसर, प्रदेश ५ को कृषि मन्त्रालयले माग्यो १ सय ७७ कर्मचारी